အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: 2008
နာရီသံ ချောက်ချက် ချောက်ချက်.
ယော်ရွက်တွေ လိုလေ မှာဝဲ
နေ့ တစ်နေ့ ဆိုတာ
တိုတောင်းသော အရင်ကလိုနေ့ များ..
အရှေ့ ကနေ ထွက်..
ညနေမှာ အနောက်သို့ နေဝင်
ဒီနေ့ ဟာမနေ့ ကနဲ့မခြားဖူး။
ကြွက်.ပိုးဟတ် ဂျပိုး ခြင်ယင်
သန့် ရှင်းရာမရှိတဲ့ နေရာတွင်
ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဖို့တောင်းဆိုတဲ့အမှု
နအဖ က ဘ၀င်မကျရင်ဖမ်းချုပ်
ရှည်လျှားတဲ့ နေ့ တစ်နေ့ ဟာ
ကုန်ဆုံးဖို့ မလွယ်တဲ့ အရာ.
ကူညီကြပါ မောင်နှမသားတို့ 
မှန်ကန်တဲ့တရားဥပဒေ အမှောင်ကိုလင်းဖို့ 
လက်သည်းထိမှ လက်ထိပ်မနာကြပါနဲ့ .
သူ့ အမျိုးထောင်ကျ..ငါ့အပူမပါ တွေးမနေပါနဲ့..
လူကောင်းလူမြတ်တွေ ဘ၀တွေ ဆုံးရတော့မလား.
သဲမှုန်ပွင့်တွေလို ဘဝ၊ လေမှာမြော.
ညီညွတ်ရင်..အရာရာဟာ အောင်မြင်မဲ့ အရေး.
နိူင်သူဟာ. ပန်းခူးကြေးမို့ 
အတွင်းမှ ကလေးများတို့ ရယ် ကျန်းမာအောင် နေကြပါ။ စိတ်အားတင်းထားပါ။ ရောက်လုပါပြီ။ ပန်းတိုင်ဆီ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:50 PM0comments
စစ်မပြင်ချင်သော်လည်း..စစ်ဆင်ရန် ဒို့ တွေ အသင့်
ပျက်စီးသော အိမ်ယာ နှင့် အိုးအိမ်မဲ့ သူများကို တွေ့လိမ့်မည်။
အားကိုးမဲ့မုဆိုးမ နှင့် ကြင်ဖေါ်မဲ့မုဆိုးဖို များကို တွေ့လိမ့်မည်။
မိဘမဲ့ သားသမီး နှင့် သားသမီးဆုံးပါး မိဘ ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အင်္ဂါပျက်ခန္ဓာ နှင့် ပိုင်ဆိုင်မဲ့ ခန္ဓာများ ကို တွေ့လိမ့် မည်။
တိရိစ္ဆာန်မဲ့ စားကျက်နှင့် အစာမဲ့ တိရိစ္ဆာန်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ရန်လို မြန်မာစစ်သားကသာ ချစ်တယ်။
သမီးကို လင်ဝယ်ပေး စိန်ဆင်ကြည့်လှမယ်။
လူ့ ဘ၀ နွံနစ်နေ..
အမှန်တရား အတွက် စစ်မက်..
ပျက်ချင်တာ ဘာဘဲ ပျက်ပစေ..
ဒို့ဘ၀နဲ့ ပေးဆပ်မယ်။
စစ်မက်တယ် ဘဲ ဆိုဆို..
ရက်စက်တယ် ဘဲ ဆိုဆို.
ဒို့ ဝိညာဉ်တွေနဲ့ အာဏာရှင်သစ်ပင်ကို သင်းသတ်မယ်။
လူ့ အခွင့်အရေးအတွက် စစ်မက်..
ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် စစ်မက်
ဒို့ တွေဟာ တရားဥပဒေ အတွက်..
ငါတို့ စစ်ကို နိူင်သည်ထိ နွှဲ ကြပါစို့။
ဒို့ ရဲ့ အပြီးသတ်အောင်ပွဲဆီ ။
သာကီနွယ်က စစ်နိမိတ်ပုံပြ မည်မျှ ကြောက်အောင် ဖြဲခြောက်ထားသော်လည်း..မကြောက် မရွံ့ နောက်မတွန့် တဲ့ ခွပ်ဒေါင်း၏ ရာဇ၀င်ကြောင်း..အမှန်တရားအတွက် သွေးသစ်လောင်းခဲ့ပါကြောင်း။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:12 AM0comments
အနုပညာသမားကောင်း တို့ ၏ ဂုဏ်ရည်။
ကျနော် မွေးဖွား အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။
ဆရာကောင်း တို့ ၏ သမာဓိ၊ ပညာ။ သီလ
သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ
ဆရာသမားဟူသော စတုတ္ထ၏ ရတနာ။
မိနဲ့ဘ အား လူသားအဖြစ်မွေးကြွေး
ကျနော် သားကောင်း လူကလေး
ပဉ္စမ မိဘ ရတနာ
မှန်သောသတိ ၊ မှန်သောသမာဓိ
မဂ္ဂင် ရှစ်ပါးက ကျနော်၏အဖေါ်။
ကျနော်သည် ၀ါဒဖြန့် ဇာတ်ကားများ မရိုက်တော့
ကောက်ကျစ်လိမ်ညာ ဖားပြဖို့ မရှိဖူး။
တမင်းရှင် ပြည်သူ ကိုစော်ကား။
ကျနော်နံမည် မကျော်ကြားလိုတော့ ဖူး။
ဆန္ဒပြပွဲ ဆွမ်းကပ် ရေလှူ.
ထောင်ချလည်း ကျနော့ စေတနာ မမွဲဖူး။
ဆင်းရဲချမ်းသာနာရေးကိစ္စ၊ ကျနော် မခွဲခြားဖူး။
မမြဲသော ဇာတိ ဇရာ ဗျာဓိ မရဏ
ကျနော် သတိ ရှိပါ၏။
အဟောင်းဘဲ စားလိမ့်မည် မဟုတ်။
ကျနော်နဲ့ပါရမီ ဖြည့်ဖက် မရွှေဇီးဂွက်
ဗြဟ္မဇိုရ် တရားမဲ့ နိုင်ငံ။
လက်တွေ ချိုး ။ လျှာတွေဖြတ်။
အနုပညာကို သတ်လို့ရရိုးလား။
ကျနော့ ရဲ့ လူချင်းစာတတ်တဲ့ နှလုံးသား
ကျနော့ ရဲ့ ဖေးမတတ်တဲ့ လက်များ
ကျနော့ ရဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ မျက်လုံးများ
ကျနော့ ရဲ့ ဂရုဏာနဲ့ အပြုံးများ
ကျနော် အနုပညာ ဘယ်တော့မှ မသေဖူး..
ဘယ်သူ သတ်မရ..မိမိပါရမီ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ။
အနုပညာသမား စားခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူ့ မေတ္တာများ
ကျနော် နှလုံးသားနဲ့ ပြန်လည် ပေးဆပ်နေတဲ့သူ။
ကျနော့ နံမည် ကျော်သူ။
ထပ်ပြောမယ် ကျနော့ နံမည် ကျော်သူ။
သေတောင် အလံလှဲမဲ့လူ မဟုတ်ဖူး။
ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုကျော်သူ။ အမြဲအားပေးနေမှာပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:32 AM0comments
နှစ် တစ်နှစ် သစ်ပြန်ပြီ။
ဒီလိုနဲ့ဘဲ ထပ်တိုးလာဦးမဲ့ နှစ် ၂၀၀၉
၂၀၁၀..လုပ်ကြံကာ တမင်နိုင်ပွဲနွှဲ မဲ့
ဒို့ တွေ မှ လက်ဦး ကြပါ့မလား။
အနုလုံပဋ္ဋိလုံ စဉ်းစားကြဖို့ လိုပြီ။
၁၉၆၂ က စခဲ့တဲ့ ဇာတ်.
မြွေအလမ္မာယ်က.မနိုင်ဘဲ မြွေကိုဖမ်းတဲ့ အခါ။
မြွေက ပို သတိတရ. ပြင်းပြင်းပြ
ဦးသန့်အရေးအခင်း အခြေအနေ
မှိုင်းရာပြည့်။ ၈၈၈၈ ။
အာဇာနည်မှန် သမျှ ထောင်ချ
ဒေါ်စု လည်း အိမ်ထဲ ကြာလှပေါ့ နှစ်ကာလ
NLD အာဏာလည်း တဖြေးဖြေးဆုံး။
အားပိုပို သုံး သွေးတိုးစမ်းတာ..နအဖ.
ဒို့ တွေသာ သုမန ကျောမှ အပြည့် ဒဏ်ရာ။
စုတ်ပြဲနေတဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးနဲ့ 
စွန့် ရဲသူ မျိုးချစ် အာဇာနည်
အရိုးတွေ တံတိုင်းထိုး ကာကွယ်နေခဲ့
အများအမြင် ကျိုးပဲ့ကြေ မြန်မာ့မျက်နှာငယ်ငယ်။
ငိုကြွေးရုံ..ကံကို မယုံနဲ့ ..
နိူင်ချင်ရင် နိူင်အောင်သာ ချ လှည့်။
သတ္တိ ဗျတ္တိ စွမ်းအားရှိသမျှထည့်၊
သူ့ လင် ငါ့လင်..မြင်မနေနဲ့ ..
ကိုယ့် လင်နှမြော..ကိုယ့် မျိုးဆက် ရေစုန်မြောမယ်။
ရေရှည်တည်တန့် ခိုင်မြဲမဲ့ နိူင်ငံရေး
မုံဆီမကြော်ရသေး နှုတ်ခမ်းနာမလား တွေးသူ.
မိန်းမဆို သွားအဖြီးသား လူလစ်ရင်စော်ကားချင်သူ
သူများကို ရှေ့ တွန်း ကိုယ်က ကျည်ကွယ်ထိုင်သူ..
ဒီလူတွေ နဲ့ ပွစိပွစိ.
အရှေ့ ရောက်အောင် မတိုး..
လူအုပ်ထဲ အချင်းချင်း တိုးနေကြ၏။
လေသာ မိုးထိ..ဥာဏ်မရှိသည့် အခါ
မြန်မာပြည် ပို စုတ်ပြတ်တာ..
စည်းရုံးညီညာသင့်တာ အခုထိ မသိ။
ဖွဲ့လိုက်ကြတဲ့ အဖွဲ့ ..
တဖွဲ့့ပီးတဖွဲ့ 
အရှုပ် တကာ့အရှုပ် အရှက်ပြေ
ငါ ဥက္ကဌ..ငါ အတွင်းရေးမှုး
ငါဘလောဂါ ငါက ၈၈ကျောင်းသားဟောင်း
ငါ ဘယ်လိုကောင်းကြောင်း..နတ်သံနှော ဇာတ်ကြောင်း
မြန်မာကတော့ တနေ့ တခြား မပြောင်းလဲ
မိန်းမဆို ဖာ..ယောက်ျား စစ်သား.
ဒီအိမ်ကို သူပိုင် ငါပိုင် လုဖို့ ထက်
ဒီအိမ်ကို ပြင်ဆင်ကြဖို့အရေးကြီးပါရက်…
သူ ဥက္ကဌ .ငါ ဥက္ကဌ ညင်းနေကြမှာလား။
ဒီလိုနဲ့ဆက်တိုက်..ဆက်တိုက်
သင်လည်း သိ ငါလည်းသိ။
ဘာညာ ယောင်ယောင်က နိုးထသင့်ပြီ။
ဖြစ်နိူင်တာဘဲ လက်တွေ့ကြိုးစားသင့်သည်။
လူကြီးမိဘအနေနဲ့ သတိပေးတာပါ။ အနာပေါ်တွေ တုတ်ကျလည်း. အင်း တိုက်ခိုက်တယ်ဘဲစွပ်စွဲချင်စွဲတော့။ ဟုတ်တယ်ဘဲပေါ့။
၆၅ နှစ် ကျနေတဲ့ လူတွေ ကို ကယ်ဖို့ မစဉ်းစား လွှတ်တော် ကုလားထိုင်ဘဲလုချင်ရင် ကိုမင်းကိုနိူင်နဲ့ အပေါင်းအပါများရယ်..ထောင်ထဲ မှာဘဲသေရတော့မယ်။ လူတော်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဆင့်မြင့်တွေထက်..နိုင်ငံနဲ့ အံဝင်အလုပ်ဖြစ်မဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ တိုက်ဖို့ ကြိုးစား ကြရမယ်။ သူတို့ပိုပို အင်အားထွား..မျိုးချစ်တွေကို တကောင်ချင်းမခြွေခင်...လက်ဦးသင့်ပါပြီ။
ခင်ဗျားတော်ရင်..ခင်ဗျားလုပ်ပါ ဘုမပြောပါနဲ့ကျမ မိန်းမ တစ်ယောက်မျှသာပါ။ ကျမ မလုပ်တတ်လို့ ဆရာတင်မယ်ပေါ့ ။ ဘုရားဆုပန် မြန်မာ ယောက်ျား ကောင်းတို့ ရဲ့ ဇွဲလုံလဆိုတာကို မသေခင် အမှတ်တရ မြင်ဖုးသွားချင်လို့ ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုမမှီဖူးလို့ ပါ. သင် အစွမ်းထက်ရင် သင်တော်ကြောင်းပြခဲ့ကြပါလားရှင်. အခုတော့ သန်းရွေ ခုနှစ်ထွေကပွဲ ထဲ ဘီလူးနဲ့ပုဏ္ဍား ကဘဲမြင်နေရတာကြာလှပြီမို့ ပါ.။ မင်းသားက ကလေးလည်း ကြည့်ပါရစေဦး။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:12 AM0comments
Labels: Lyrics, Politics, Truth
ကျမ ချစ်တဲ့သူရဲကောင်း (သို့ ) အညတရ ခွပ်ဒေါင်း
မောင်ဟာ အညတရ ပေမဲ့
ပထမတွင် ၃နှစ်ချမှတ်ခံရပြီး ပြီးခဲ့သည့်လကထပ်တိုး၍ စုစုပေါင်း၁၉နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ မိထ္ထီလာ ထောင်တွင် ကျခံနေရပြီး ဇနီးဖြစ်သူမှာ ဖေါ့ကန်ကားမှတ်တိုင်တွင် ဖရဲသီးစိတ်ရောင်းရင်း လမ်း လျှောက် တတ်စ အရွယ် သားငယ်လေးနှင့်အတူကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဇနီးဖြစ်သူမှာလည်း တကြိမ် အဖမ်းခံရပြီး ဖြစ်ရာ ဒုတိယ နီလာသိန်းဖြစ်မလာဖို့ဆုတောင်းရန် မှတပါး။။ အညတရ ခွပ်ဒေါင်းများ အားဦးညွတ် ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါသည်။ http://yeyintnge.blogspot.com/2008/12/blog-post_1214.html (ရဲရင့်ငယ် Blog မှ)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:29 AM 1 comments
Labels: photo, Politics, Truth
ပြိုင်တူတွန်းစို့အောင်ပွဲသို့ 
မွေးဖွား ဇာတိ ကွဲ
သို့ သော်လည်း လူဟာလူဘဲ
လွတ်လပ် မျှတရေးတော့ လိုအပ်တယ်။
နိူ့ ချိုစို့ ရဖို့ငိုပြမှ ရမယ်။
တိတ်တိတ်နေ ထောင်တန်တဲ့ စကား..
အိုးဆိုတာ အရိုက်နာမှ ပိုကျစ်မာ.
ကြောက်ရင် လွဲ..ရဲမှ မင်းဖြစ်..
မျိုးဆက်သစ်လှိုင်းတံပိုး..ပိတ်ဆို့ လို့ မရဖူး.။
အမျိုးသာသနာကို ကယ်တင်မဲ့ ကတိ။
အသံတိတ် ဆွံ့ အ
လက်နက်ချတယ် မထင်နဲ့ ။
အနားယူ အားအင်ဖြည့်ဖို့ 
ခြသေ့င်္ ခဏ အိပ်သွားတယ်။..
အရှေ့ တက်မဲ့ဆင် နောက်တလှမ်းဆုတ်.
ဟုန်းကနဲမဟုတ်တဲ့ မြေ့မြေ့ ဖွဲမီး
လောကကြီးကို လောင်မီးပြာကျနိုင်တာမို့ ။
မနက်ဖြန် ဟာ ဒို့ အောင်မဲ့တိုက်ပွဲနေ့ ။
မသဒ္ဓါ (၁၂။ ၁၀။၂၀၀၈)
မောင်ငယ်လေး မိုဃ်းသွေးသို့ 
(ဆွံ့ အနေ့ များ) ကဗျာ ဖတ်မိသောကြောင့် စိတ်မကောင်းပါ။ မျိူးဆက်သစ်များ အတွက် အနာဂတ်ကို တည် ဆောက်ပေးဖို့လူကြီး တွေ မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူ နဲ့ကိုယ့်တမင်း ကိုယ်စား နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူ ဆိုတာ ကွာခြားပါတယ်။
ဗိုလ်လုပ်ရမဲ့ ခေါင်းဆောင်မဲ့သူနဲ့ မိမိ စိတ်ဓါတ်အရ တာဝန်ကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းသူ ရဲ့ စေတနာက ကွာပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) ထက်ပိုပိုဆိုးရွားလာတဲ့ မြန်မာပြည်အပေါ် ခေတ်လူငယ်တွေ အတွေးမှာ ပိုမို ဆွေးမြေ့၊ ပိုမို ရှုံတွ၊ ပိုမိုပုပ်ပွ၊ ပိုမို ဆွံ့ အ လာခဲ့တဲ့ အနာဂတ် မဲ့ မြန်မာပြည်ကို အကောင်း ပကတိ ပြန်မြင် ချင်တာ မျိုးချစ် စိတ်ပါ။ ဒီအတွက် တက်လူ များ ကို ဂုဏ်ယူလေး စားမိပါတယ်။
လူဆိုတာ လူသဘာဝမို့အာဏာရှင်တွေ မှာတင် မသမာလောဘ ရှိတာမဟုတ်။ နိူင်ငံရေး လုပ်စားသူတွေ မှာ လည်း ၀ိသမ လောဘ တဏှာရှိတာ မမေ့ထားပါနဲ့ ။
တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးရတောင် ပြန်ထူထောင်ဖို့ လွယ်လွယ်နဲ့ မရ၊ အနှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူကြရမှာပါ။ အရှင်မွေးနေ့ ချင်းကြီးမယ် မဟုတ်ပါ။ နိူင်ငံရေး လုပ်စားသူတွေ အနေနဲ့ လည်း ပြိုင်တူ တွန်းဟန်ပြ နေတာ ထက်စာ တကယ် အားထည့်ပြီး တွန်းပေးကြပါ။ လေနဲ့တိုက်လို့ကျေညာချက်နဲ့တိုက်လို့ ၊ ဟို အသင်းနံမည် ဒီအသင်း နာမည်ပြောင်းဖွဲ့ လို့၊ လွတ်လပ်ရေး ရရန် မလုံလောက်သေးပါ။
တကယ်နိုင်ငံကို ချစ်ရင် လက်တွေ့ ပြပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သက်သေပြခဲ့သည်။ မင်းကိုနိုင်တို့စုစု နွေးတို့ပြခဲ့သည်။ ဇေယျာသော်တို့ အုပ်စု ကပြသခဲ့သည်။ နိူင်ငံအတွက် အနှစ်ပေါင်းများစွာ ဘ၀ပေါင်း များစွာ အသက်ပေါင်း များစွာ ထောင်ထဲစတေးခဲ့ သည်။
သင် ရော ဘာတွေ လုပ်ပြီးပါပြီနည်း။
သင်တကယ် ဘဲစေတနာထား လုပ်ခဲ့ပါသလား။
ဤအဖြေကို ဖြေနိုင်သူမှာ သင်ဖာသာသင်ဘဲဖြစ်ပါသည်။ နွားကွဲနေရင်တော့ ကျားက ပျော်ပျော်ကြီး ဆွဲ စားဦး မှာ ပါ။ နောက် အနှစ် (၂၀) အဝေးရောက် အစိုးရဘ၀၊ အဝေးရောက် ဘာညာ အသင်း အဖွဲ့ ဘ၀ဘဲ ပျော်မနေ ကြပါနဲ့ ။
ပြည်သူက ကျေးဇူးသိတတ်ပါသည်။ နိုင်ငံသားမည်သူမဆို ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်၊ နှစ်သက်သုကို မဲရွေးခွင့် မဲ ပေးခွင့်ရှိစေရပါမည်။ လွတ်လပ်ရေး ရရင်..ထိုက်သင့်တာ တော့ ခံစား စံစားကြမှာပါ။ နည်းနည်း အားထပ်ထည့် တွန်းပေးကြပါဦး။ ကျမတို့အားလုံး မြန်မာပြည်ကို ချစ်ကြတာ မမေ့ပါနဲ့။ အဝေးရောက်ဒေါင်းများ အားလည်း စစ်ကူခေါ်ပါတယ်။ ၀ိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးကြပါ။
မြန်မာမြေကို မဆွံ့အအောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ မျိူးဆက်သစ်များကို အားလျှော့ စိတ်ပျက်ခြင်းမရှိအောင် အရှေ့ မှ မားမားမတ်မတ်ဖြင့် အားပေး အလုပ်လုပ်ပြစေချင်ပါသည်။
ယနေ့ သင်၏ ကြိုးစားမှူ သည် မနက်ဖြန် အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုးစားမှူသည် မည်သည့် အခါ မှ နောက် ကျသည် ဟူ၍ မရှိပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:49 AM0comments
အမေသို့နှုတ်ဆက်ခြင်း။
အမေ ဆုံးမဖူးတဲ့ စကား..
ကျနော့ ရင်ထဲမှာ အမြဲရှိတယ်။
ရာထူး ဂုဏ်သိန် နဲ့့တိုင်းတာတိုင်း
ဥစ္စာ ဓန နဲ့တိုင်းတာတိုင်း
အာဏာ လက်ညှိုးညွန်ရာ ရေဖြစ်တိုင်း
ကြင်နာ ဂရုဏာ လူပီသ
ကျနော် တို့ ဟာ ခေတ်လူငယ်။
ကျနော်တို့ အနာဂတ် ကျနော်တို့ ရွေးခွင့်ရှိရမယ်။
ရွဲ့ နေတာမြင်..တဲ့ ပေးရမှာ..လူ့ တာဝန်ဘဲ။
လူမျက်နှာမဲ့ သူတွေ ကို တွန်းလှန်တယ်..စွန့် ဝံ့ ရဲရဲ
ထောင် ဘယ်နှစ်နှစ် ကျပစေ..ကျနော် လက်မမြှောက်ဖူး။
အဝေးရောက် မဲဇာပို့ကျနော် မျက်ရည်စို့ မဲ့ကောင်မဟုတ်ဖူး။
ရာသီဆိုး ဌက်ဖျားကြမ်း..ကျနော့ သွေး အရောင်မပြောင်းလဲနိုင်ဖူး။
အသွေးအရေ ခြောက်ခမ်းတောင် ကျနော့ စိတ်ဓါတ် လန်းဆမ်းဆဲ။
နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိ ဆက်တိုက်မဲ့ ကျနော်။
ကျနော့ ဝိညာဉ်က လူငယ်တွေ ကြားမှာ..ရှင်သန်ဆဲ..
နအဖ ရယ်..လူငယ် ကို သတ်လို့ မရပါဘူး..
ကျနော်သေတောင် ကျနော့ နံမည် ရာဇ၀င်ထဲ..
ဘယ်တော့ မှ မပျက်တော့မဲ့သူ..
လူမျက်နှာအပြည့် နဲ့အာဇာနည်လူ..
သားမောင်အတွက် အမေ ဂုဏ်ယူ။
ကျနော်ပြန်လာမယ် တနေ့ ..
မောင်ဇေယျာသော် ၏ မိဘများအတွက်..မသဒ္ဓါမှ မေတ္တာဖြင့် " မငိုပါနဲ့ မမ. သူပြန်လာမှာပါ "
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:23 AM0comments
အာဏာရှင် ဘီလူး အစွယ်ပြူးပြူးထွက်
လယ်မြေကိ်ု သိမ်းဆည်းဖို့ 
ရွာတွေ ကို မီးတင်ရှို့ 
ဖေါက်ပြားတဲ့ လူ့ သဘော
အူမ မတောင့်နိုင်လို့သီလ လည်းမစောင့်ဖြစ်..
မွေးရာပါ အပျိုရည် ချရောင်းရတဲ့အဖြစ်။
ဆာလောင်ခြင်း က ပိုပူပြင်းရဲ့။
ဝယ်မရဖူးဆိုတဲ့ မြန်မာမ ၏ အိနြေ္ဒ
မြန်မာ မိန်းမ အညွန့် က်ျိုး..
XX သည်မျိုး ဖြစ်ရတဲ့ ဒို့ ဗမာ..
ကမ္ဘာ အနှံ့ မှာ။
စစ်သားက အလကား အားပေးမြဲ.
အမျိုးမဲ့ အိုးအိမ်မဲ့ 
ဒို့ မြန်မာ အမျိုး တစတစ ပျက်သုန်း
စာရင်းမဲ့ နေ့ စဉ်သေတာ.
နအဖ ထောက်ပံ့ရေးက မရှိသလောက်ရှား
အသိပညာတွေ က ခေါင်းပါး
တိုးချဲ့ လိင်ပညာပေးရေး က နည်းပါး
အများသုံး ကရိယာများ ကတဆင့် ကူးစက်
လူနာဦးရေ.တစ်နေ့ တစ်နေ့တိုးတက်တယ်။
ဂျာအေး ကို သူအမေရိုက်..
မြန်မာတွေ အေ တွေကိုက်..
အမှန်ကိုမပြောရဲ..လူတွေ ရှောင်မှာလည်း စိုးရိမ်ကဲ..
သင်ဓုန်းဓါး သုံးလို့ ဘုန်းကြီးတွေကိုကူး
လင် ဆေးချပြီး မိန်းမဆီကူး
ဆေးခန်း မသန့် စင် ကရိယာ များကကူး။
တစ်ရာ က တစ်ထောင်..
ဘယ်လောက်ရှိမလဲ ..ကူးစက်တဲ့ လူပေါင်း
ငါကောင်မလေးတွေ သန့် တယ်..
သင် စိတ်ကူးတွေ ယဉ်မနေနဲ့..
ဒို့ အားလုံးနေကြတဲ့ မိုင်းကွင်း..
အစွမ်းသာ..သင် ဘယ် လောက်ခံမလည်း။
တနေ့ မှာ မိုင်းဗုံးပေါက်..
အန္တရာယ်ဆိုတာ မလွယ်ကောင်းစမို့ 
ဒို့ အားလုံးညီတူ မိုင်းရှင်းကြစို့ ။
AIDS မှ ကာကွယ်ပေးကြပါ။
မသဒ္ဓါ ( ၁၂။၃။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:30 AM0comments
ဥဒေါင်းမင်းတို့ ရဲ့ တောင်ပံ ရိုက်သံ..
အာဇာနည်တို့ ၏ မိန့် ခွန်းများ..
"ထီးသုဉ်း နန်းသုဉ်း၊ မြို့သုဉ်းသုည၊
တို့တတွေသည်၊ သေသော်မှတည့် သြော် ကောင်း၏။’"
ဆီးဘန်နီဆရာတော်ကြီး ရဲ့ သံဝေဂ
လွတ်လပ်ရေးကို ‘က’ ပြီးတော့မယူဘူး၊
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က မှာ ခဲ့တယ်။
“မတရားတဲ့ အမိန့် အာဏာဟူသမျှ
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမရဲ့ မိန့် မှာချက်
မင်းကိုနိုင် ရဲ့ ခွပ်ဒေါင်းတွန်သံ
လူထု စွမ်းအားနဲ့ 
အာဏာရှင်စနစ်ကို ချေမှုန်းပစ်ကြ။ "
လူထုစိန်ဝင်း ရဲ့ နောက်ဆုံးစကား
အောင်ဝေး ကဒီလို သုံးသပ်ထားတယ်။
“ IT (သတင်းနည်းပညာ) ကို လေ့လာချင်လို့
Internet ကို သုံးလိုက်တာ
Insein ထောင်ကို ထောင် ၄၅ နှစ်
"ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း အပိုဒ် (၃၀) ပါ
ပုဒ်ခွဲ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁ အရ လူသားသဘာဝ
နိုင်ငံသား တယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးအတိုင်း
ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့တာက ကျနော်။
ပုဒ်ထီး ပုဒ်မတွေတပ်၊ ထောင်တွေချနေရင်
ပြည့်ဝတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ကို
နှစ်ထောင့်တဆယ်ကို ကျနော်တို့ ဘယ်လို ယုံကြည်ရတော့မလဲ"
ဇေယျာသော် ရဲ့ နိူုင်ငံရေး Hip Hop သံစဉ်
သင် မည်မျှ အမျိုးကို ချစ်ပါသလည်း..
သင် မည်မျှ ကိုယ်ကျိုးကို စွန့် ဖူးပါသလည်း..
သင် မည်မျှ တိုင်းကျိုးကို တာဝန်ကျေခဲ့ပြီလည်း..
သင်၏ မော်ကွန်းဝင်မိန့် ခွန်း
အံ့မခန်း သင်ကော ဘယ်လို ဆိုချင်ပါသလည်း..
ဒါ ဒို့ တွေရဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။
သင်၏ အနာဂတ်အတွက် သင်ရင်ဆိုင်..
ဒေါင်းအရွယ်စုံ သံပြိုင်ခွပ်ကြစို့ 
နာကြင်မှုရဲ့ ပေါက်ကွဲတဲ့ သဏ္ဍာန်
မိုးသို့ ခြိမ်းလုလု့ မာန်..
ဥဒေါင်းမင်းတို့ ရဲ့ တောင်ပံရိုက်သံ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:44 PM2comments
တချို့ လူက ဆင်းရဲ၊ တချို့ လူက ချမ်းသာ
တချို့ လူက လှ၊ တချို့ လူက ရုပ်ဆိုး
တချို့ လူက ကံကောင်း၊ တချို့ လူက ကံဆိုး
တချို့ လူက တော်၊ တချို့ လူက ညံ့
တချို့ လူက အမျိုးမြတ်၊ တချို့ လူက ယုတ်ညံ့
တချို့ လူက စိတ်ထားမသန့် ၊ တချို့ လူက မြင့်မြတ်
တချို့ လူက အာဇာနည်၊ တချို့ လူက တကိုယ်ကောင်းဆန်သည်။
တချို့ လူက သနား၊ တချို့ လူက ရက်စက်အား
ဒီလိုဆန့် ကျင်ဘက် လူတွေကြား
အဖြူနဲ့အမဲ
တွဲ မနေနိုင်တာ အပြစ်လား.
ဆီနဲ့ရေ ကွဲပြားတာ အပြစ်လား။
ဒို့ တွေဟာ ဆင်းရဲချင် ဆင်းရဲမယ်။
ဒို့ တွေဟာ နိမ့်ကျချင် နိမ့်ကျမယ်။
ဒို့ တွေဟာ အေးဆေးရင် အေးဆေးမယ်။
ဒို့ တွေဟာ လူသတ်ရဲချင်မှ လူသတ်ရဲမယ်။
မတရားတာတွေ့အသက်စတေးရဲတယ်။
ပါးစပ်ပြော အမျိုးချစ်တဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူး။
မွေးရာပါ အမျိုးဂုဏ်ကို သေထိ ထိမ်းကြတယ်။
ဂုဏ်သရေရှိ် အယောင်မဆောင်တဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ်ဖြစ်တယ်။
နာကြင်တဲ့ခံစားမှု ဂရုဏာနဲ့ ကုတတ်တယ်။
ဖိနှိပ်တဲ့ ရက်စက်မှု ဒို့ စာနာမှုရှိတယ်။
မတရားတဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်မှု တွန်းလှန်ဖို့ သတ္တိရှိတယ်။
ဒို့ တတွေဟာ ခွပ်ဒေါင်းတွေ..
မတရား ဖိနှိပ် ခန္ဓာ နွမ်းခွေ
မသဒ္ဓါ ( ၁၁။၂၃။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:58 AM0comments
ခွေးလား..လူလား.. ရာဇ၀င်က ပိုင်းခြားတယ်။
လူ ဆိုတာ တသက်မှာ
ကယ်သူကို သူခိုး သူခိုးအော်
အရက်ကြိုက် မိုက်ခဲ့ တဲ့တပင်ရွှေထီး
မယ်နုလုပ်သမျှ ထမီစဆွဲရတဲ့ သာယာဝတီမင်း
တိုင်းပြည်ဖျက်တဲ့ ထမီဆုချခံရ ကင်းဝန်.
မိန်းမစော်ကား လူအူစားတဲ့ ရနောင်မောင်တုတ်
ကျန်စစ်သားရဲ့ သတ္တိဗလ ရဲရင့်မှု
မင်းမှူမထမ်း သခွါးခင်းမက်တဲ့ တောင်သူကြီးမင်း
ထမင်းတစ်နပ် ကျေးဇူးသိတတ်သော ငခင်ညို
သာသနာ အတွက် သိုဟန်ဘွားကို သတ်တဲ့ မင်းကြီးရန်နောင်။
ရန်သူဘက်မှယှဉ် တရုတ်ကို စီးချင်းထိုးသော သမိန်ပရမ်း။
စစ်မြေပေါ် သစ္စာကိုမယုံနဲ့ပြောတဲ့ လဂွန်းအိမ်.
သမိုင်းထဲ ယခုထိတိုင် မည်နာမ ထင်ပေါ်
သင့် အကျင့်သိက္ခာက ဆက်၍ရေးသည်။
သင် ခွေး မျိုးလား..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:07 AM0comments
အိပ်စား ကာမ၊ ဤသုံးဝ
အမှားနဲ့ အမှန်၊ ဝေဖန်ကြည့်
အတ္တ နဲ့ ပရဟိတ
ဒါမှသာ၊ လူ့ ဂုဏ်ရည်ရှိ။
ဟီရိ နဲ့ သြတ္တပ တရား
မိမိ မကောင်းမှုပြု ၊ မိမိ၏ ကိုယ်၌ရှက်ခြင်း
မိမိ မကောင်းမှုကို၊ သူတပါးမြင်သိ
အရှက် နဲ့ အကြောက်တရား
ယဉ်ကျေး ပြူ ဌာ၊ လူပီသ.
မတော်မတရား၊ မစော်ကား ၊
ကိုယ်ကျင့် ထိမ်းမှ သင်လူ။
သူတပါးအား စော်ကားတာမြင်တွေ့ .
လက်ပိုက် မကြည့်တတ် မှ သင်လူ
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး၊ သနားတတ်မှသင်လူ ၊
နာကြင်သူများ၊ ကြင်နာတတ်မှ သင်လူ
စေတနာဖြူ ၊ ကူညီတတ်သူ
သင့် အကျင့်သိက္ခာ မွှေးသန့် ဖြူ။
သူသည် လူပေါ့၊ ဂုဏ်ယူလော့၊
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:05 AM0comments
ကွဲအာနေသော ဥပဒေ..ကျမ သေတောင် မကြောက်ဖူးအဖေ။
ကျမ ချစ်သော တရားခုံရုံးတော်ပေါ်
ဒါဟာ ဥပဒေ မဟုတ်ဖူး။
ဥပဒေ ဘက်တော်သား ကျမ.
အသက်ရင်းလို့ဥပမာပြခဲ့မယ်။
နအဖ လုပ်ကြံ ပါးစပ် ဥပဒေ
အဖေ့ သမီး..အဖေ့လို သတ္တိကြီးတယ်။
အားမငယ်နဲ့သေရင် အမျှဝေပါလှဲ့ 
(၈၈) အကိုတော်၊ အမတော်တွေရဲ့ သံမဏိတံတိုင်းထဲ
ကျမလေ သဲပွင့်လေး တစ်လုံးသာပါ
(၉) နှစ် ဆုံးတာ ကိစ္စမရှိ..
အဖေ့ မျိုးနွယ်ဆက်၏ ဇာတိမာန်သတ္တိ..
(ဗကသ) အဖွဲ့ဝင် ကျမ
အသက်က (၂၁) နှစ်.
ကျမ အာဇာနည် မဟန်နီဦး။
ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်လို့ ဆန္ဒပြ။
လောင်စာဆီ မြင့်လို့ ဆန္ဒပြ။
အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄(က)၊
လူထုကို ဆူပူစေရန် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ)၊
တရားမဝင် လူစုလူဝေးမှု ပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅
မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိဘဲ အသင်းဖွဲ့စည်းမှု ပုဒ်မ ၆
ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ်နဲ့ ၆ လ တဲ့။
ချချင် သလောက် ချ..
ကျချင် သလောက် ကျ..
အစိုးရ မပီသတဲ့ အာဏာရှင်
ရုံးတော် နဲ့ မညီတဲ့ ရုံးတော်
ကျမ်းကိုင်တဲ့လက်နဲ့လာဘ်လာဘလက်ခံ
သမာဓိ မရှိတဲ့ ခုံတော် တရားသူကြီး
တိုးယိုပေါက်နဲ့ပေါက်ပြဲနေတဲ့ ဥပဒေ
ကျမ ခေါင်းမော့ ရင်ကော့ဝင်ခဲ့တယ်။
တနေ့ ဖြူဖွေးသန့် ရှင်းရေး..
ကျမ နုပျိုမှူကို ချကြွေးမယ်။
ကျမ အသက်ကို စတေးမယ်။
ဘယ်တော့မှ ဒူးထောက် အယူခံမ၀င်ဘူး..
ရဲရင့်သော ဥပဒေချစ်သော တူမလေးဟန်နီဦးအတွက်..
စိတ်ဓါတ်ရဲရင့်သောသမီးတစ်ယောက်မွေးဖွားထားသော ဦးထွန်းဦးအတွက် အလွန် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:53 AM0comments
နောက်ဆုံး အားကလေး ဘယ်သူလာဖြည့်မလဲ။
ပြိုင်တူတွန်းရင် ရွှေ့ နိုင်တယ်။
လမ်းမပေါ်က ပိတ်ဆို့ ကျောက်တုံး
လုံးလုံးမရွေ့ ..တုတ်တုတ်မရွေ့ 
နောက်ဆုံးလိုတဲ့ အားကလေးတငွေ့ 
မသဒ္ဓါ ( ၁၁။၁၂။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:01 PM0comments
ဖောင်းကြွနေသော အမြင်ကပ် ပုဒ်မများ။
ဆန်ရေပေါတဲ့ ဒို့ ရွှေပြည်.
ခုတော့ ငတ်မွတ် သူတောင်းစားပေါသည်။
၀န်ထမ်းတွေ ၀င်ငွေမလောက်..လာဘ်လာဘ မျက်နှာဘဲ ထောက်.
ကျောင်းသားစာသင်ရန် အချိန်မလောက်..အပြင်မှာ အမှိုက်ပုံကောက်
ကျောင်းဆရာတွေ ပါးစပ်ပေါက်ပျောက်၊..ကြံဖွတ် မ၀င်မနေရသောကြောင့်။
မိန်းမတွေ ပြည်တန်ဆာဖြစ် တယောက်ပြီးတယောက်.အလုပ်မရှိသောကြောင့်။
တိုင်းရင်းသားတွေ ရွာပစ်ပြေး တောထဲရောက်၊ စစ်တပ် ဓါးမြတိုက် မုဒိန်းကျင့်သောကြောင့်။
လူအိုလူမင်းတွေ လမ်းဘေး..ပင်စင်မလောက် ခိုကိုးရာမဲ့သောကြောင့်။
စာနယ်ဇင်းသမားတွေ ထောင်ထဲရောက် .အမှန်သတင်းရေးသောကြောင့်။
ဂျာနယ်တိုက် ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်..ကလေးအလုပ်သမားပုံ ဖေါ်ပြမိသောကြောင့်။
ရှေ့ နေတွေ နှိပ်စက် ထောင်ချ..နိူင်ငံရေးသမား တရားခံ အမှုလိုက်ပေးခြင်းကြောင့်။
ဆွေမျိုးမှန်သမျှ နှိပ်စက် ..ဦးဂမ္ဘီရနဲ့ အမျိုးတော်သာကြောင့်။
ကလေးငယ်တွေ ဖမ်းဆီး ..စစ်ထဲဝင်လိုသူမရှိသောကြောင့်။
အနုပညာသမားမို့ ထောင်ကျ ..ဘလော့ ရေးမိခြင်း ကြောင့်။
အဆိုတော် ဂီတစာဆို ထောင်ကျ ..နိူင်ငံရေး သီချင်းဆိုသောကြောင့်။
ရုပ်ရှင်မင်းသားအား ညှင်းပမ်းထား. နာရေးကူညီမှုအသင်း ဖွဲ့ သောကြောင့်။
စေတနာ့ ၀န်ထမ်းအုပ်စုတွေကိုဆွဲ ..လူသေမြုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်။
လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ် သူများအရိုက်ခံရ ..ကောင်းတာ လုပ်သောကြောင့်။
သံလက်သီးအထိုးခံရသူ..လက်သီးရှေ့ မျက်နှာလာ ထိုးခံသောကြောင့်။
ရှေ့ နေကိုယ်တိုင် ဘာမှုမှန်းမသိတဲ့အမှု
ရုံးတော်ကို မထီမဲ့မြင်ရာ စော်ကားမှု။
လူရမ်းကား ကြံဖွတ်ရုံးထဲဝင်သွား ကြံဖွတ်ရုံးအားစော်ကားမှု။
အထိုးခံရသူ အားထိုးသူကစော်ကား။ အထိုးခံရမှု။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ အလေးပြု ကျူရှင်ဆရာခေါင်းညွှတ်မှု။
မျက်စိပါ video ကြည့် စိန်စီသောည အခွေလက်ဝယ်မှု။
ကျောင်းသားတွေ စီတန်းလမ်းလျှောက် လမ်းပိတ်ဆို့ စေမှု။
ဘုန်းကြီးတွေ မေတ္တာသုတ်ရွတ် နအဖ နားကလောမှု။
မတရားပိုက်ဆံလုပ်အားပေး ILO ကိုတိုင်ကြားမှု။
သူ့ သားက အဖေ့အိမ်နေ ၀ရမ်းပြေးလက်ခံမှု။
လူမမည်အဖေအမေ ခလေးစစ်သား ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှု။
လှေခပေး စီးနင်းသူ လိုက်ပို့ လှေထိုးသား NLD လှေပေါ်တင်မှု။
မိဘ၀န်ထမ်းများ ရာထူးပြုတ် နိူင်ငံရေးသားသမီးများမွေးထားမှု။
NLD က ကိုမြသန်းထိုက်အား သေနတ်ကျည်ဆန်ထိမှန်မှု
မုန်တိုင်းသင့်သူများအတွက် ဒီချုပ်ဝင်က ဆန်လှု အသက်ကယ်တင်မှု။
မဟားဒယား ကိုယို့ ကားယား
ဒါ ကျမ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ရွှေပြည်။
နိုင်ငံတော်ကို ဆူပူ လှုံ့ဆော်မှု ။ နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅(ခ)၊
သာသနာကို ညိုးနွမ်းအောင် လုပ်ဆောင်မှု ပုဒ်မ ၂၉၅(က)၊
အီလက်ထရောနစ် ပုဒ်မ ၃၃(က)၊ ၃၈၊
ဗီဒီယို အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂(ခ)၊ ၃၆၊
မတရားအသင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှု ၁၇၊ ၂ ၊
တရားမဝင် လူစုလူဝေးမှု ပုဒ်မ ၁၄၃၊
လူစုခွဲ ရန် ညွှန်ကြားချက် မနာခံမှု၊
ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သော အစုအဝေး၌ ပါဝင်ခြင်း ပုဒ်မ ၁၄၅
တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှု။ (လဝက) အရေးပေါ် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃(၁)
တရား စီရင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂၈
မတရားအသင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မ ၁၇ (၁)၊
အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆
ဘာသာတရားကို ညိုးနွမ်းစေမှု ၂၉၅ (က)၊
ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သဖြင့် လူစုခွဲရာ၌ မလိုက်နာမှု ၁၄၅၊ ၁၄၇၊
အမျိုးသားညီလာခံအား ဆန့်ကျင် နှောင့်ယှက်သည့် ဥပဒေ ၅/၉၆၊
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယို ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂ (ခ)/၃၆၊
အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း ကိုင်တွယ်မှု ဥပဒေ ၃၃ (က)/၃၈
အရေးပေါ် စီမံချက် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ (ည)
ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေ ၁၇(၁၀)၊ ပုဒ်မ ၄၂၀
နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်မှု ပုဒ်မ ၂၄
လိမ်လည်မှု (ပုဒ်မ ၄၂၀)
အခြားနိုင်ငံများအား အသရေပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၃၀(ခ)
နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄(က)၊
ကိုလိုနီခေတ် သခင်ပေါက်စက ထောင် (၆)လ
နအဖခေတ် ၈၈ ကျောင်းသားဘဝ ထောင်ကျ (၆၅)နှစ်
သန်းရွှေကျမှ ထောင် လေးသင်္ချေချရမယ်။
တရားမ၀င်အစိုးရ ရဲ့ တရားမ၀င်တဲ့ ဥပဒေ
တရားဥပဒေ ဒို့ ဘက်မှာ အမြဲရှိတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:31 PM0comments
လေးမြှားတစ်စင်းနဲ့ အနုပညာသည်။ ခေါင်းမငုံမဲ့ ဘလော့ဂါစစ်သည်။
ဂုဏ်သိက္ခာသေ သူ့ တဆွေလုံးကြေမယ်။
ဒါ မီဒီယာ လက်နက်၊ ပေါ့ပျက်ပျက်မထင်နဲ့ 
လူနဲ့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်း.
ရေပေါ်ကဆီ ရေနဲ့ မရောသာ။
တရားဥပဒေမမျှ တနေ့ တော့ ဆွဲချ။
အပေါ်မှာ တသက်လုံး မကောင်းသူ ဘယ်သူရှိဖူးသလဲ။
အောက်မှာ တသက်လုံး ကောင်းသူ ဘယ်သူနေရမလဲ။
အာဏာရှင် အညာစကား ဘယ်သူမယုံ။
ရှေးလူတွေရေးခဲ့ ၊ ဒို့ လေ့လာခဲ့ လူ့ သမိုင်း။
ဒို့ တတွေလည်းရေးမဲ့၊ ဒို့ ခေတ်ရဲ့ ဒို့ သမိုင်း
အမှန်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြော ဘယ်သူ့ ကို ကြောက်ရမလဲ။
နားတွေပါတယ် ..ကြားကြဖို့ ။
လက်တွေ ပါတယ်…ရုန်းကန်ကြဖို့ ။
ခြေထောက်တွေပါတယ် သွားလာကြဖို့ 
အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်ခွင့် နွံ့ မှာမနစ်သင့်။
ရေးသားထုတ်ဖေါ်လှစ် မွေးရာပါ အခွင့်။
ငါသည် ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်
“ ငါ့ စိတ်ဓါတ်နှင့် အနုပညာ
ဘယ်တော့မှ ချုပ်နှောင်လို့ မရဘူး . .
လူကိုသာ အကျဉ်းချလို့ ရချင်ရ၊
စိတ်ဓါတ်နဲ့ အနုပညာကို. အသေသတ်လို့ မရ"
ဦးဝင်းတင်လို နှစ် (၂၀) ထောင်ထဲ
ငါ့ မနေရဲဘူး ထင်လား.
ဖွဲ့ ပြချင်တဲ့ သံစဉ်တွေ
ဘယ်တော့ မှ လက်မမြှောက်ဖူး
တနေ့ နေ့တချိန်ချိန်
ငါ့လက်က ပျောက်ကျခဲ့တဲ့မြို့ တော်.
ဒီမိုကရေစီနဲ့ပြန်ခေါင်းမော်စေရမယ်။
မသဒ္ဓါ (၁၀။ ၁၁။ ၂၀၀၈)
မောင်လေး ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်သို့ ။ အားမငယ်နဲ့မောင်လေး..ရောက်လုနီးပြီ ပန်းတိုင်ဆီ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:09 AM0comments
ငါကွ ဟဲ့ငါ..ငါသာ အသိ
မောက်မာစွာ စော်ကားခဲ့တဲ့ သီဟသူ
တနေ့ မှာ တူသော အကျိုးပြန်ယူလှဲ့ 
တကြိမ်တစ်ခါ သာထွေးတဲ့ ကွမ်းသွေး။
ကွမ်းသွေး တစက် ရဲ့တန်ဖိုး
သွေးစက်နဲ့ပြန်ဆပ်ခဲ့တယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:39 AM 1 comments
မွေးရပ်မြေသို့ မေတ္တာပို့ 
မြန်မာ့ ၏ ဒေါင်း။ ရောင်နီလောင်းချိန်
ဘဘကြီး ဦးဝန် (မင်းသုဝဏ် [၁၉ဝ၉ - ၂ဝဝ၄] ) ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ပေါက္ကံပြည်၌ ကဗျာကို မှီးထားပါသည်။
မသဒ္ဓါ သည် စင်စစ် တတ်ကျွမ်းသော ကဗျာဆရာမ မဟုတ်သေးပါ။ စေတနာအလျှောက် နိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုး၍ မြန်မာ့ဦးစွန်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြန်ထွန်းကား စေလိုသူ သာမန် မြန်မာ အမျိုးသမီးသာဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:33 AM0comments
သစ္စာဆိုခြင်း ရန်မာန်ရှင်းစေ။ အမှန်တရား၏ အဖြေ
ရုပ်နာမ် ခန္ဓာ (လေးပါး) တို့သည်
စိတ်လျှင်သာ ပဓါန ရှေ့သွား
စိတ်တို့ ဖြင့် ပြီးကုန်၏၊
ပြစ်မှားစိတ်ဖြင့်၊ ပြောဆို ပြုလုပ်
ဆင်းရဲခြင်းသည် ။ ထပ်ချပ်မကွာ
ပြောဆို ပြုလုပ်၊ ကြံစည်ထုတ်သော်
ကောင်းမှု အထိပ်။ အေးချမ်းရိပ်သည်
ထိုသူပါးသို့ ချမ်းသာသုခ အစဉ်လိုက်လေ၏။
သူတဦး၏ နတ် နိဗ္ဗာန်
အမိအဖသည် မပြုစွမ်း နိုင်၊
ထိုသူ၏ဘဝ၊ မြင့်မြတ်သောဘုံ ရောက်ရှိပါတုံအံ့။
သူတစ်ပါး၏ ကောင်းမှုမကောင်းမှု ပြုမပြု
မိမိ မည်မျှ ကောင်း မကောင်း
ကောင်းမှု မကောင်းမှု ပြု၏ မပြု၏
မိမိဖာသာ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ရှုရာ၏။
အိပ်မပျော် နိုးသူအား ညဉ့်တာရှည်၏၊
ခရီးပန်းသူမှာ ယူဇနာခရီးသည် ရှည်၏။
လူမိုက် သံသရာ ရှည်လျား၏။
မိမိ မိုက်ကြောင်း အပြစ်ကိုသိ၏၊
ရူးမိုက်ဝါကြွား၊ ငါသာပညာရှိ တကားဟု
ပညာရှိ တို့သည် ချီးမွမ်းခြင်း
အောင်မြင်ခြင်း ၊ ကျဆုံးခြင်း ၊
ချမ်းသာခြင်း ၊ ဆင်းရဲခြင်း ၊
အခြွေအရံ များခြင်း ၊ နည်းခြင်း ၊
ချီးမွမ်းခြင်း ၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း အားလုံးသည်
လောကပါလ ၏ နိယာမ၊ သဘာဝတရားများ
( လောကဓံတရား ရှစ်ပါး သာ ) ဖြစ်သည်။
အကဲ့အရဲ့ စဉ်းငယ်မျှ လွတ်သောသူ
အကဲ့ရဲ့ မလွတ်၊ လောကဓံ မှမလွတ်နိုင်သေးပါက
မိဘကောင်းမှ မွေးဖွား သမီးကောင်း၏
ဘ၀တစ်ကွေ့ ၌ မိဘယုတ်မှ မွေးဖွား
အမိယုတ်သား ကြမ်းတမ်း၊ ယုတ်မာလပ်ပေ၏။
ရှက်စရာသည် မည်သည့်အရာဟူသည်ကိုပင် မသိ
ခွေးရူး နွားရူးနှယ် မြင်ရာ ရမ်းတတ်၏။
မိမိ ၏ အဆင့်အတန်း ဖော်ပြကြွားဝါ
လည်သောဘီး ချေးသင့်ချိန် ရပ်မည်သာဖြစ်၏
အမှန် အမှားကို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်တို့ ဖြင့်
သံဃာ့ ဂုဏ်။ ဆရာ့ ဂုဏ်
ဆွေ ဂုဏ် မျိုးဂုဏ်
လူသားတစ်ဦး၏ ဘ၀ ရရှိခဲ့ရခြင်းကြောင့်
အသိအမြင် ဥာဏ်ပညာကို ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်
ဂုဏ်တော်တို့ ၏ ကျေးဇူးအားရှစ်ခိုးဦးတင်.
ဤ မှန်ကန်သော သစ္စာတရားကြောင့်
ပတ္တမြားကျောက် ကဲ့သို့ 
ပေးလှာသူ မှ တဖန်ပြန်လည် ယူဆောင်ရရိုး
ထိုသူ၏ ပြုလာသော စေတနာနှင့် အမျှ
ကျမသည် သစ္စာ ဆိုပါ၏။
တရားမျှတ လောကပါလတရား ဖြင့်နေနိုင်စေရေး
မသဒ္ဓါ (၁၀။ ၂၀။ ၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:00 AM0comments
အတောင်စုံငြိမ်းချမ်းရေးဌက်..ဝေဟင်ထက်ဆီ ပျံလမ်းဆီသို့ 
အဖေနဲ့ သားတောင် ဝိဝါဒ မူကွဲ
အချိန်က အသိုက်ထဲက ထွက်
ဒို့ တွေလည်း ပျံခဲ့ဖူးတယ်
လူငယ်တွေ အပေါ် ယုံကြည်တတ်ရမယ်။
လူငယ်ကလည်း လူကြီးကို လေးစားတတ်ရမယ်။
အသစ် အသစ်တရား လက်တွေ့ ရှာဖွေလိုတယ်။
လူကြီးဆိုတာ အတွေ့ အကြုံရင့်တယ်
ပြဿနာနဲ့လောကဓံတရားတွေ
ထောင်ချောက် ဘယ်ဟာ ဘယ်မှာ မြင်သိတယ်။
လူငယ်အပေါ် စေတနာထား သွန်သင်ဆုံးမပေးတယ်။
လူငယ်တွေရဲ့အမြင်..လူငယ်တွေ ရဲ့ လုပ်လိုအား.
စိတ်ပူ ကြောင့်ကျ ဘေးမရှိစေချင်ပေမဲ့
ပျံချင်တဲ့ ဒေါင်းဌက်.လွတ်လပ်စွာ ပျံပါစေ။
လူငယ်ဘာဝ အမှန်တရား လက်တွေ့ ရှာဖွေပါစေ။
အမှားဘယ်ဟာ ရှင်းပြတာ လူကြီးတာဝန်။
လိုက်နာတာ မလိုက်နာတာ..လူငယ်နဲ့ အလုပ်.
ဝေဟင်ထဲ မုန်တိုင်းလာ..ဘာတွေ လုပ်..
စာတွေ့ ..ပြောပြတာ က အလွန်လွယ်။
လက်တွေ့ မုန်တိုင်းထဲက ဒေါင်းကလေး.
အခက်အခဲ.တွေ ကိုယ်တွေ့ ကြုံတဲ့အခါမှ
လူကြီုးဖြစ်ဖို့လူငယ်ဘ၀ ဖြတ်သန်းရဖူးတယ်။
ကြိုဆိုပါသည် NLD မှ လူငယ်များ..
လူကြီးတွေ ရဲ့စေတနာကို ကျေးဇူးဆိုခဲ့ရမဲ့အချိန်။
လွတ်လပ်မျှတ လူ့ ဘောင်တည်ထောင်ရန်.
ကဲ ပျံသန်းကြစေ.။ ငြိမ်းချမ်းရေးဌက်.
ဝေဟင်ထက်မှာ အမှန်တရားသို့ ရှာ။
မသဒ္ဓါ ( ၁၀။ ၁ရ။၂၀၀၈)
NLD မှ လူငယ်များအတွက်.အားမာန်ပေးပါတယ်။ နိူင်ငံအတွက်ဆက်လက် ထမ်းဆောင်နိူင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းများဖြင့်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:43 AM0comments
မုန်တိုင်းလေဆန်မဲ့ ခွပ်ဒေါင်းများသို့ အားပေးခြင်း
ဘာမှ စိတ်ပူပင်မနေပါနဲ့ 
ဘာမှ ငိုကြွေးမနေပါနဲ့ 
မနက်ဖြန် မနက်ထပ်ထွက်လာမဲ့ နေလုံးကြီးရှိသေးတယ်။
ဖိတ်ကျစင် ကွဲသွားတဲ့ ထောပတ်တစ်ခွက်အတွက်.
ဘာမှ စနိုးစနောင့်မဖြစ်စေနဲ့ 
ထပ်ရှိတဲ့ နွားများ..ထောပတ်စားဖို့ မွေးရမယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) အတွက်.
ဘာမှ နောင်တဖြစ်မနေနဲ့ ။
ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များ အမှားပြင်ဖို့အမှန်ရှာ။
အမှားကို သိ အမှန်ရှိတယ်။
ဘ၀မှာ ဘာမှ အလကားဆိုတဲ့ အရာမရှိဖူး။
လွယ်လွယ်ရတဲ့ အရာ တန်ဖိုးတတ်မရှိဘူး။
အဓမ္မဆိုတာ ဓမ္မရဲ့ ပျော့ပြောင်းတဲ့ပျော့ကွက်ကို
မတရားမှုဆိုတာ သူပျင်းသူယုတ်များရဲ့ အတ္တနဲ့ 
လောဘ မောဟ တွေကြား..
ဒါပေမဲ့ လာမယ် ကြာမယ်။
ဒီအတွက် ဒို့ တတွေ စတေးရမယ်။
ဓမ္မ အတွက် ဒို့ သွေးတွေရင်းရမယ်။
အမိမြေအတွက် အသက်စွန့် ရမယ်။
မှန်မှန်သာရွေ့ ။ တက်မထောင်ကြနဲ့ ဟေ့။
နှစ် (၂၀) ပေး သင်ခန်းစာ. လေ့လာကြဟေ့။
ကြားလေ သွေးထိုးစကား နားမယောင်ကြနဲ့ဟေ့။
ဘယ်လောက် အင်အားသာ တပ်မဟာဘဲဖြစ်ဖြစ်.
ရိုမန်၊ ဟန်းတရုတ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယား
ပါသေ့။ ပါရှင်း။ ဘေဘီလိုးနီးယန်း။
အီဂျစ်။ ဂရိ။ အာမေးနီးယန်း။
မွန်ဂို ကုဘလေခန်။ မဂို အာသောက။
လူဝီ။ နပိုလီယန်။ ဇာ။ ဟစ်တလာ
မိုဆိုလိုနီ ပေါ့ပေါ့၊ ချောင်ဆက်စကူ။
ခုံမေနီ။ ရှား။ မားကို့ စ် ။ ဆာဒန် အစရှိတဲ့
သူတို့ လည်းဘဲ ဒီလမ်းသွားပါလိမ့် မယ်။
သူယုတ်ဆိုတာလည်း ချို မရှိဘူး။
ဘာဆိုလိုသလည်း အရိုးသာ ကြည့်ရှောင်။
စစ်ယူနီဖောင်းအပေါ်က တင်တဲ့ ပိတ်ဖြူတဘက်
သွေးစွန်းလက်နဲ့ သွန်း ရေစက်ခွက်
အရောင်ပြ ဗုဒ္ဓဘာသာ လိမ်တယ်။
တခါ နိူင်ပွဲ ဆုမပေးတဲ့ အလိမ်မျိုး
နောက်တခါ ဒို့ အနိုင်ရလည်း
ပေးပါ့မလား သံသယ သာ ကြွယ်။
ဒို့ ပြန် အလမ္မါယ်ပြတတ်ရမယ်။
အင်အား စုစည်း ညီညာပြီး.
တရွေ့ ရွေ့တစ်နေ့ တစ်နေ့ 
ပုဂံ ဘယ်ရွေ့ မလည်းဟေ့။
သင်သည် အမိမြေရဲ့ သူရဲကောင်းချစ်သား
ဒို့ တတွေ အမှန်လူသား..
ရေနှယ် ကြည်လင်တဲ့ မြန်မာပြည်သား..
ဖိလွန်းရင် ပေါက်ကွဲကြစို့ ရဲ့။
စုစည်းရင်နွားအုပ် ကျားငစဉ်းလဲကိုတောင် မောင်းထုတ်
ရပ်ကြည့်နေ..နောက် ၂၀ ကျွန်ခံပေဦး
သွေးကြောင်နေ ဒို့ တွေအရှုံးဘဲ အနိုင်မရှိ
ရရင် ရ မရရင်ချ ကြဖို့ ဘဲရှိ
ကြောက်မွေးပါ ဇာကနာနဲ့သာ နှုတ်ခဲ့
လာဟေ့ ခွပ်ကြတော့ သူငယ်ချင်း။
သွေးနဲ့ ရင်းမှ တော်လှန်ရေး.
ကျန်တဲ့ရာဇ၀င်ကြွေး နောက်လူက ဆက်ရေးမယ်။
ပြိုင်သူသာတွန်း ကိုယ့်တာဝန်ကျေဖို့ ဘဲလိုတယ်။
တိုက်ပွဲသို့ ပြင်။ ဒေါင်းဆိုလျှင်.
ခွပ်၍သာ အသက်စွန့် ကြရိုး.
အာဏာရှင်ဇက်သွေး နဲ့ ဒို့ ခြေဆေးမည်.။
မသဒ္ဓါ (၁၀။ ၁၇။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:03 AM2comments
မြေခွေး ဘာကြောင့် အူရသနည်း။
အနံ့ ခံ.ရှာဖွေ ခိုးသုတ်
တည်ထားတဲ့ မီးနေသည်မ ရဲ့ ဆနွင်းအိုး
တိုးမိတဲ့အခါ သူ့ ကိုယ်ပေါ်မှောက်
င့ါ ၏ ခန္ဓာ ရွှေရုပ်သွင်
မတူညီပါ ထူးခြားတဲ့ ငါ
ဘယ်သူ့ ကို ဖူးစာရှင်ရွေးရပါ့။
ရွေလင်ဘန်းနဲ့ဆီဆမ်းထမင်း
အနူလက်နဲ့ ရွှေခွက်ကို တမ်း။
မြေပြင်က အူနေသည့် မြေခွေး..
ချောင်းရေထဲ သာနေတဲ့ လမင်းငယ်..
ဟော တွေ့ ပြီ..သူဘဲ သူဘဲ
" လမင်းကလေးသာ ကိုကို့ ဖူးစာရှင်..
မသဒ္ဓါ ( ၁၀။၁၄။ ၂၀၀၈)
ဖေဖေပြောပြဖူးတဲ့ အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်ပါ။ စိတ်ကူးယဉ်သူများအတွက်..ရည်စူးပါတယ်.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:55 AM0comments
ရာသီဆဲ့နှစ်ပွဲနွှဲခဲ့ ၊ ပျော်ရွှင်တဲ့နှလုံးသားရဲ့မြေမဟီ
ကြီးသူတွေရိုသေသမှု ပြုကြတဲ့ ချိန်ခါ.
စာရေးတံမဲပွဲ ဆွဲကြတဲ့ လ၀ါခေါင်
ခါ တော်သလင်း ရိုးရီးလေးလေး လှေပြ်ိုင်တဲ့မောင်
၁၂ လဆီ ပွဲတော်များ
မြန်မာ ဓလေ့ မပျောက်စေသား
၄၆ နှစ်အတွင်း မြန်မာပြည်ဆိုသည်..
ကျမတို့ ငယ်စဉ်ကာလ မြန်မာဘဝ..
ဘယ်တော့ မှ ပြန်မရ
အဝေးက မျှော်ရမ်း လွမ်းခဲ့တဲ့ အမိမြေ..
မသဒ္ဓါ (၁၀။ ၁၅။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:41 AM0comments
ဓါတ်ပုံများကပြောပြခဲ့ ဘွားရဲ့မွေးရပ် တချိန်ကရွှေမြေ
စားမဲ့ဆန်ထဲ က လက်တစ်ဆုတ်
တမူး တပဲ တကျပ်တပြား.
ဘယ်မှာလည်း..ဆွမ်းတော်ဗျို့ တဲ့ ကြေးစည်သံ
ကြားခွင့်မသာရတော့ အသံမစဲပဌာန်းပွဲရဲ့ ရွတ်ဖတ်သံ
တိတ်ဆိတ်ခဲ့ စာသင်ခန်းထဲ ခလေးများရဲ့ စာအံသံ
မတွေ့ မြင်ရ ပန်းခြံတွေထဲ ခလေးများဆော့ကစားသံ
ရှင်ပြုပွဲ မစဲတဲ့ စည်ဗြောသံ။
ကိုယ်ခန္ဓာ ဘယ်မျှ ပင်ပန်းပန်း
မိမိ ထမင်းလုပ်.မိမိဖာသာ အလုပ်လုပ်
အားတက်ပါမှ သင်သည် စွမ်းအားရှင်.
လာဘ်တွေ စားတဲ့ စားဖားတို့ ပြည်.
အပြစ်စင် သာသနာတော် ရေကြည်နောက်.
နောင်လာမဲ့ မြေးမြစ်လောင်းများတို့ ရေ..
အာဏာရှင် ခွေးအ အစားမှာ ပုပ်သိုးသွားတယ်။
ဒို့ မြေကို ဖျက်တာသူ။
ဒို့ ဘာသာကို ဖျက်တာသူ။
ဒို့ ခလေးတွေအနာဂတ် ရေနှစ်သတ်တာသူ။
မွန်ဂို အုပ်ဖူး၍ မြန်မာမျိုးမပျက်
ရှမ်းသိုဟန်ဘွား. မင်းကြီးရန်နောင် နှိမ်နင်းခဲ့
ဗြိတ်ိသျှ အုပ်စိုး ဘုရားမြေ ဖိနပ်မစီးအောင်တားနိူင်ပါရဲ့
လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်တို့အသက်ပေးခဲ့ပါရဲ့
ဘွားတို့ ခေတ်မှ..မြန်မာကို မြန်မာအုပ်စိုး.
တွေးရင်းရှက်တယ် မြေးတို့ ရယ်.
ဆီကိုရေချိုး။ ဆေးရိုးမီးလှုံ၊ စပါးတောင်ပုံခဲ့တဲ့ပြည်။
တမူးရလို့တပဲလှူ.ဒါန ရက်ရောပါတဲ့ပြည်။
ထွက်တဲ့ ရေနံဓါတ်ငွေ့ကိုယ်တိုင်မသုံးရတဲ့ပြည်။
လူသေကောင်ပုပ် ငါးပူတင်းစားပစေအမိန့် ပေး
တချိန်က ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဒီနေရာမှာလေ..
ခုများတော့ တရုပ်ပြည်ရဲ့ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်.
ရွေ့ ပြောင်း နျူကလီယားလက်နက် သိုလှောင်ရာ
ရုရှတို့ ရဲ့ ယူရေနီယမ်ရှာရာ မိုင်းတွင်း.
အစာရေစာမဝ၊ အဲဒီ ပိန်ညောင်သေးကွေး
စက်ရုပ်လို ခေါင်းလှုပ် လက်လှုပ်နေရတဲ့
ဂလီဗာ ပုံပြင်ထဲက လူပုကလေးတွေဟာ
ဘွားတို့ အမျိုး ရွှေုမြန်မာပေါ့.
အိမ်နီးနားချင်းတွေ က သယံဇာတတွေ ၀ိုင်းကြိတ်
ကမ္ဘာကလည်း သူ့ ပြည်တွင်းရေးဘဲဆို မျက်စိမှိတ်။
UN က မကူညီခဲ့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်
ပြည်လူတွေ သေမှာကြောက် ခေါင်းငြိတ်ကောင်းလိုက်တာ
နိူင်ငံကို ဖဲ့ရောင်း သမီးကိုစိန်ဆင်ကောင်းတဲ့လူတွေကြောင့်
အခုတော့ မြန်မာ..တရုတ်အောက် အင်ပါယာ
ထူးမြတ်လှ တဲ့ ရွှေပြည်..
ဒါ ဘွားမွေးရပ်မြေ မြန်မာပြည်။
စွမ်းအားရှင်.ဆိုသည်မှာ နအဖ၏ လက်သပ်မွေး စွမ်းအားရှင်ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ;)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:23 AM 1 comments
မျက်ဖြေ သံဝေဂ လင်္ကာ (အနန္တသူရိယအမတ်ကြီး)
သံသရာစက်၌ ၊ ကြိုက်လတ်တုံမူ
အနန္တသူရ သည် ပုဂံခေတ် ကထင်ရှားကျော်စောသော ပညာရှိသုခမိန်အမတ်ကြီးဖြစ်သည်။
မြန်မာနှစ် - ၅၃၃ (ခရစ်နှစ် - ၁၁၇၁ ) တွင် ပုဂံထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်စိုးစံသော ဘုရင် မင်းယဉ်နရသိင်္ခ သည် ညီတော်အိမ်ရှေ့စံ နရပတိစည်သူ၏ မိဖုရား ဝေဠုဝတီကို အတင်းအဓမ္မ သိမ်းပိုက် ယူသောကြောင့် မြန်မာနှစ် -၅၃၆ တွင် ညီတော်နရပတိစည်သူက နောင်တော်ကို ပုန်ကန်သတ်ဖြတ်လုပ်ကြံပြီး နန်းတက်သည်။ ထို့ နောက် နောင်တော်၏ အထိန်းတော်သားလည်းဖြစ်၊ လူရင်းအဖြစ် ခစားသူလည်းဖြစ်သည့် အနန္တသူရိယ အ မတ်၏ အပေါ်တွင် အထင်လွဲ အမျက်ပွား အငြိုးထားပြီး "ဖမ်း၍သတ်စေ"ဟု သူသတ်တို့အား မိန့်မှာ လေ၏။
ရဲရင့်တည်ကြည်သော အနန္တသူရိယသည် အသတ်ခံရအံ့ဆဲဆဲတွင် လောက၏ ဖြစ်ပျက်ဓမ္မတာ သဘောကို ဆင်ခြင်၍ အေးဆေး တည်ငြိမ်စွာ "သူတည်းတစ်ယောက် ကောင်းမှုရောက်မူ" အစဖြာသော မျက်ဖြေ လင်္ကာ ကို သူသတ်ကုန်းတွင် ရုတ်ချည်း စပ်ဆို ပြီး မင်းကြီးအား ဆက်သပါဟု မှာကြားခဲ့လေသည် ။
မင်းချင်းတို့ ဆက်သသော သံဝေဂ အလင်္ကာ ကို နရပတိစည်သူမင်း ကြားလေသော်. သံဝေဂ ရ၍ ချက်ခြင်း လွှတ်ရန် အမိန့်ပေးသော်လည်း အနန္တသူရ အမတ်ကား လွန်ခဲ့လေပြီ။
မသဒ္ဓါအား..ဤရက်အပိုင်းအခြားတွင် "နောင်တခေတ်၏ အောင်စစ်သည်" ဟု မိမိကိုယ်အမည် တတ်ထား သော၊ မိမိကိုယ် မိမိ မျိုးချစ်များ ဟု ထင်မြင်ပြောနေကြသူ၊ နိုင်ငံတော်၏ ထောက်ပံ့မှု ပြည်သူ၏ အခွန်ဘဏ္ဍာ အားစားသုံး၍ နိူင်ငံကြီး တစ်နိူင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော စစ်သည် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ခလေးများက လာရောက်၍ ရန်စ ပါသည်။
ယခင်ကတည်းက နိူင်ငံရေးအခြေအနေ မငြိမ်မသက်သော အချိန်များ၌ နိူင်ငံရေး ဘလော့ဂါ မိန်းကလေးများ၏ ဘလောက် နှင့် CBox များတွင် လာရောက် ဖိနှိပ်စော်ကားခြင်း၊ စကားအရာ ညစ်ညမ်းစွာသုံးစွဲ၍ ရန်စခြင်းတို့ရံဖန်ရံခါ ရှိခဲ့ရိုး ထုံးစံရှိပြီး ဤသည်မှာနအဖ ၏ မီဒီယာ လက်နက်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် လင်း လက်ကြယ်စင်၊ မမေငြိမ်း၊ မခင်မင်းဇော် နဲ့ကျမ အား အမြဲတမ်းလိုလို လာရောက် တိုက်ခိုက်လေ့ရှိကြပါသည်။
ဤ အကြိ်မ်တွင် ရန်စလာသူများသည် မသဒ္ဓါထက် အသက်အရွယ် ငယ်မြစ်သော မလိမ်မိုးမလိမ်မာ က လေးများ ဖြစ်သောကြောင့် ကျမ အနေဖြင့် လူကြီး ပီသစွာ ခန္ဓီစ ပါရမီ အား မိမိဖာသာ မွေးမြူ၍ ခွင့် လွှတ် ခဲ့ပါသည်။ သူတို့ ကလေးများ၏ ပြူမူချက်မှ ကျမ ၏ ခွင့်လွှတ် နိူင်သော ပါရမီအား ရင့်ကျက်လာစေခဲ့ပြီး၊ စိတ် ဓါတ်၏ ကြံ့ခိုင်အားအပေါ် တစုံတခုသော အတိုင်းအတာအထိ မှတ်ကျောက်တင်နိုင်ခဲ့သည့် အတွက် မသဒ္ဓါ အနေဖြင့် ကျေးဇူး အထူးတင် ရှိပါသည်။
ကျမအနေဖြင့် ခလေးများ၏ ငယ်ဂုဏ်။ အမျိုးဂုဏ်။ ရာထူးဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်၊ မောက်မာမှုတို့ အပေါ် တတ်နိူင် သမျှနားလည် ခွင့်လွှတ်ပြီး လာရောက်စော်ကား ရေးသားချက်များကို အခြားသော စာရှူသူများ ဖတ်မိပါက နောင်တခေတ် အတွက် အရာရှိရာထူး အုပ်ချုပ်ရေး ရာထူးနေရာများတွင်တက်လာမည့် စစ်အရာရှိ လောင်း များ၏ အတွေးအခေါ် အယူအဆ၊ မျိုးချစ်စိတ်၊ အသိဥာဏ် ပညာ။ အကျင့်သိက္ခာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ မကျဆင်း ရလေ အောင် ရေးသားသမျှကို ဖျက်ပေး ထားပါသည်။
လောကဓံတွင် တည်ကြည် ရင့်ကျက်ခဲ့သော လူကြီးတယောက်အနေဖြင့် ခလေးတစ်ယောက်၏ အပြစ်တင်ဆဲ ရေး ပုတ်ခတ်မှူအပေါ် မည်မျှပင် မည်သို့ စော်ကား စေကာမူ မည်သည့် စကားနှင့်မျှ တစုံတရာ ပြန်လှန် ပြော ဆို ခြင်း၊ ပြန်လှန် ရန်ဖြစ်ခြင်းများ ကို မသဒ္ဓါ အနေဖြင့် စိုးစဉ်းမျှတုန့် ပြန်မှူ ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ IP address အတု များသုံး၍ လက်သီးပုန်း ထိုးနေကြသော်လည်း တနေ့ သောအခါတွင် မိမိ ဘာပြောခဲ့သည်။ မိမိ ဘာလုပ်ခဲ့ သည် ကို မိမိဖာသာ မိမိသိကြပြီး နောင်တရကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ ပါသော်လည်း..သူတို့ လေးများ၏ မွေးဖွား ကြီးပျင်းခဲ့သော ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ မျိုးရိုး မိဘတို့ ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအား ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊ ယုံကြည် ချက်၊ အတ္တ၊ လောဘ၊ မောဟ၊ ဂါရ၀။ ကိုယ်ချင်း စာတ ရား။ မေတ္တာတရား။ ကတိ သစ္စာ နှင့် အရွယ်နှင်ယှဉ်၍ ရှိအပ်သော ပါရမီများအပေါ် အမေအရွယ် မြန်မာ မိန်းမတစ်ဦး အနေဖြင့် ရင်သပ် ရှူမောစွာ ဆင်ခြင် သုံးသပ်မိပါသည်။
လူလိမ်မာသား ယဉ်ပါး၍ သူယုတ်သား ဆိုးသွမ်း ရမ်းကားတတ်သော လူ၏ သဘောသဘာဝ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ရေမြေ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှူသည် လူတဦး၏ သိက္ခာ သမာဓိနှင့် အကျင့်စရိုက်တို့ အပေါ် မည်သို့အရောင် လွှမ်းမိုး တတ်ကြောင်း သင်ခန်းစာ ရရှိပါသည်။
အမျိုး မမှန်ပါက၊ ဗီဇ မမှန်ပါက တနေ့ တွင် မည်သည့် အပင်မျိုး ဖြစ်ကြောင်း ဗူးပေါ်သလိုသာ ပေါ်ရရိုး ထုံးစံ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးမမှန်သော မျိုးစေ့မှ ထပ်ကျ၍ ပေါက်ကြမည့် အပင် ကလေးများသည် လည်း ဘမျိုးဘိုးတူ ကလေး များသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသော ကောက်နှုတ်ချက်ကိုသာ ရင်လေးစွာ ချမိခဲ့ပါကြောင်း။
ဤ အတွက် ဖြစ်ပျက်တတ်သော သဘောသဘာဝ လူတို့ ၏ ဖြစ်တည် ချုပ်ငြိမ်းရာသည် နောက်ဆုံးတွင် လားရာ နေရာမှန်မှာ တမျိုးသာ ရှိကြောင်း အများသိစေရန် ဤ သံဝေဂ အလင်္ကာ ကို တင်ပြကိုးကားပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:27 PM5comments
သူ့ ကျွန်အဖြစ် နွံ့ နစ်မခံ..
ဒို့ ပြည်ကြီး လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ဖူးတယ်။
တွေးကြည့်မိရင်. နှစ် ( ၄၆)
ခုထိ အာဇာနည့် သွေးတွေ မခြောက်သေးဘူး။
ခုထိ စတေးမှု တွေ မပျောက်သေးဘူး။
လွတ်လပ်ရေး မှန်က..သွေး အသက်ရင်းရ.။
ဒို့တတွေကလည်း စိန်ခေါ်ရဲ
သူတို့ ကလည်း..ဆက် ညှင်းဆဲကြဦးမယ်။..
ဒို့ လက်ထက်မှာ ရင်းမလား..
ဒို့ တွေ တာဝန်ကျေပြီလား။
ဒို့ တတွေ မှာ..ဒဏ်ရာတွေ ဗလပွ.
ကိုယ်စိုက်တဲ့ မျိုးစေ့၊ ကိုယ်ရိပ်သိမ်းရမှာဘဲ။
ဒို့ မသေခင် အပြီးသတ်ရမှာဘဲ..
ဆက်ခွပ်ကြစို့သူငယ်ချင်း။
မလွယ်တမ်း ရင်ဆိုင်ရမည် ဒို့ သိသည်။
လက်နက်အား မပြိုင်နိုင်သည်.ဒို့ သိသည်။
အာဇာနည် ၏ သွေး..
ဒို့ တွေသွေးစက် အပေါ်ကထပ်.
ဒို့ တတွေ ဆက်လက်တော်လှန်နေဆဲ.
ဒို့ ခေတ်ကျမှ သွေးမကြဲ။
သမိုင်းသစ်ထိုးမဲ့ ဒို့ အာဇာနည်..
Generation wave လူငယ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။
မသဒ္ဓါ ( ၁၀။ ၁၁။ ၂၀၀၈)
Generation wave တနှစ်ပြည့်အတွက်..
အမိမြေအတွက် အခွင့်အရေးမယူ။ လစာရိက္ခာမယူ။ အာဏာမယူ၊ နာမည်မယူ၊ ကျော်ကြားမှုမယူ၊ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ရိုးရှင်းစွာမြင်. နိူင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေး အတွက် ရရာနေရာမှ.ရရာ လက်နက်ဖြင့် ရွတ်ရွတ်ချွံချွံ တော်လှန်သော သံမဏိ စိတ်ဓါတ်နှင့် မြင့်မြတ်သော ရဲဝံ့သော ကလေးများ အား လေးစားဂုဏ်ပြုပါသည်။
ဆက်လက် တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပါစေကြောင်း မသဒ္ဓါ နှစ်လည်ဆုမွန်တောင်းပေးပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:23 PM 1 comments
လူ့ ဘောင်ဘဝ ပျက်စီးမှု၏ အခြေခံဇစ်မြစ်
လူတို့ ၏ အသက်အဆင်း
မူလ အရင်းမြစ်တို့ အား..
ဤသို့ရှင်းလင်းပြတော်မူပေ၏
ချစ်သား ရဟန်းတို့ ...
၂) ဆင်းရဲခြင်းတို့ပွါးများ နောက်ဆက်
သူတစ်ထူး ဥစ္စာ ခိုးယူလာ၏၊
၃) လိမ်လည်ခိုးယူမှု ပွါးသမှုသည်
လက်နက် ပွါးများ တိုးတက်လာ၏၊
၄) လက်နက်ပွါး များ ပေါများလာသော်
၅) အသက်သတ်မှု ပွါးများဘိသော်
မဟုတ်မမှန် ပြောမှု များပြားလာ၏၊
၆) လိမ်ညာပြောမှု ပွါးများလာသော
ရ) ကုန်းချောမှု ပွါးများလာသော်
ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားယွင်းစွာ ကျင့်မှုလာလေ၏၊
၈) ကာမဂုဏ်အာရုံ မှားယွင်းစွာပါက -
တရားနှစ်ပါးတို့ ပွါးများ ကုန်၏၊
၉) ထို တရားနှစ်ပါးတို့ ပွါးများလာသော် -
ပျက်စီးစေလိုခြင်း (ဗျာပါဒ) တို့ ပွါးများ လာကုန်၏၊
၁၀) ထို တရားနှစ်ပါးတို့ ပွါးများလာကုန်သော် -
မှားသော အယူဝါဒ ပွါးများလာ၏၊
၁၁) မိုက်မှား အယူဝါဒ ပွါးများပါက...
မတရားသော တပ်မက်ခြင်း (အဓမ္မရာဂ)၊
အလွန်အကြူး တပ်မက်ခြင်း (၀ိသမလောဘ)၊
မှားသော အကျင့်တရား (မိစ္ဆာဓမ္မ) ၊
၁၂) အဆိုးတရား ဤသုံးပါးတို့ ပွါးများလာသော် -
ကောင်းစွာ ပြုသင့်သောကျင့်ဝတ်ကို မပြု
ကြီးသူတို့ကို ရိုသေဂါရဝမဲ့ခြင်း ဟူသော...
မကောင်း တရား တို့သည် ဆင့်ကဲ ပွါးများလာကုန်သတတ်။
၁၃) ဤသ်ို့မကောင်းသော တရားတို့ ပွါးများလေလေ
ထိုလူတို့၏ အသက် ဆုတ်ယုတ်တတ်၏၊
မသဒ္ဓါ (၁၀။ ၉။ ၂၀၀၈)
စက္က၀တ္တိသုတ် (မှ)၊ ပါထိက၀ဂ်၊ ဒီဃနိကာယ်။
နာဂစ် အတွက် ဖြန့် နေသော လက်ဖဝါးများကိုသတိရနိုင်ကြပါစေ၊
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:17 PM0comments
အမှန် ရှာစေ..အိုချစ်ဆွေတို့ ။
(မှန်ပြီ ဟု မယူဆသင့်သော အချက် ဆယ်ပါး။)
ကေသမုတ္ထိ နိဂုံးသား၊ ကာလာမမင်းတို့က
မြတ်ရှင် ဗုဒ္ဓ၊ ဂေါတမ အား
“ အသင် ဗုဒ္ဓ။
အချို့သော သမဏ ။
အချို့သော ဗြာဟ္မဏ တို့သည်
မိမိတို့ ၏ အယူဝါဒ
အခြားသော အယူဝါဒ များကို ရူတ်ချ
" ကာလာမ မင်းတို့ ၊
၁) တစ်ဆင့် စကား၊
ကြားပါများ ယုံ ဟုတ်မှန်နိုင်သည်
၂) ရှေးက ဆိုရိုး၊ ဘေးဘိုး စဉ်ဆက်
မှန်ပြီ ဟူသည် မယူဆသင့်။
၃) သမိုင်း ထောက်ထား
၄) စာပေ ကျမ်းဂန်
၅) မိမိကြံစည်၊ မှန်ရမည်ဟု
တက္ကဗေဒ၊ နည်းနာမျှ လည်း
မှန်သည် ဆိုငြား၊ မှတ်မမှားနှင့်။
၆) သူများ လုပ်ထုံး၊ နည်းမှီသုံး၍
ရ) ကျိုးကြောင်း ထောက်ထား
၈) သူများဝါဒ၊ ငါတို့ ဝါဒသည်
မှန်လေစွဟု ။ မယူဆနှင့်။
အမှန်ဝါဒ ဟုတ်မှန်လှဟု မယူဆသင့်။
၁၀) ငါ၏ ဆရာ။ လေးစားရာ၏
ဤသာအမှန် လက်ခံရန် ဟု
မျက်ကန်းတစ္ဆေ ၊ မယုံလေနှင့်။
အိုဘဲ့ ချစ်သား၊ အမျိုးသားတို့
ပညာရှိသူ ချီးမွမ်း ယူ၍
ကုသိုလ် တရား။ စီးပွါးဥစ္စာ။
သုခ ချမ်းသာ၊ ရတနာတို့ 
ပေါကြွယ် တိုးမည်။ မုချမည်၏
မြတ်သော အကျင့်၊ ကောင်းသော အကြံ၊
မှန်သော အယူ။ ဖြူသော နှလုံး
ပြုမူထုံးက၊ လိုက်နာ သင့်စွ
ဗုဒ္ဓ ရှင်မြတ်။ မိန့်မှာ အပ်သည်။
ကြားသိပါစေ။ ချစ်မိတ်ဆွေသို့ ။
အမှားအမှန်။ ကိုယ်တိုင် ဝေဖန်
(အဂုင်္တ္တရ နိကာယ် ပါဠိတော် ပထမတွဲ ။ ကာလမ သုတ္တန်အရ)
ယုတ်သော အကြံ။ မှားသော အကျင့်နှင့် နှလုံးခြစားနေသော..မိတ်ဆွေများ အတွက်. မေတ္တာဖြင့် ဓမ္မ လက်ဆောင် ဝေမျှပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:11 AM0comments
သက်ရောက်မှူတိုင်းမှာ တူညီသော တန်ပြန်အားရှိသည်။
ဤနေရာမှာ အမှန်တရား၏ ကဗျာ..
မသေခင် အမှန်ကို ဆုံးမပြုပြင်ခဲ့
ကျမတော့ ဘယ်ခါ လက်မလျှော့
ယုံကြည်ချက် ဂရုဏာသာ ပဓါန။
ကျမ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မှ စိတ်ဓါတ်မကျ။
ခလေးမို့ ဖက်ပြန် ရန်မဖြစ်ပါဘူး.
သူ့ အမေကို သာ အမေချင်း စာနာ..
သူ့ မိဘကိုသာ မိဘချင်း စာနာ..
ကိုယ်သာ သူ့ အမေ နေရာ..
ရှက်လို့ သာလဲ သေလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်း
မသဒ္ဓါ (၁၀။၇။၂၀၀၈) စွေစောင်း၏ ဘလော့တွင်တင်ထားသော post အား အရင်သွားရောက်ဖတ်ရှု စေချင်ပါသည်.။
မသဒ္ဓါ ရေးထားသောကဗျာတွင် စွေစောင်းအပေါ် တိုက်ခိုက်ခြင်းအလျှဉ်းမရှိခဲ့ဘူးပါ။
စည်းကို စကျော်လာသူ က လူကြီးမိဘ ကိုမသိ ဘုန်းကြီး သံဃာကိုမသိ ဘုရားမသိသူဖြစ်၍ ပြန်ရေးပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:55 AM0comments
မြန်မာပြည်၏ မျက်လုံးပွင့်နေတဲ့ တရားဥပဒေစောင့်နတ်သမီး။
ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ကိုထင်ကျော်
နိုင်ငံတော်ကို အကြည်ညို ပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က)
နိုင်ငံတော် လုံခြုံမှုကို ထိခိုက်ရန် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)
ဆင်းရဲသားကို ဆန်လှူဒါန်းခဲ့သူများ မနာလို မရှုစိမ့်အား
နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေမှု
သူတို့ ဘဲသေနတ်နဲ့ပစ်၊ ဒဏ်ရာရသေသေ ဘာဖြစ်ဖြစ်။
ဒို့ က ပစ်တာမဟုတ်
တရားခံ ကသာ ဒို့ ပြောင်းဝကို လာတိုး
သေနတ်ပြောင်း ရှေ့ နှောက်ယှက်မှု
ကိုမြသန်းထိုက် အတွက်. ၄ နှစ် ထောင်ဒဏ်ဆု။
စီတန်းဘဲ လမ်းလျှောက်၊ ဘုရားတက်ဘဲ ဝတ်ပြု
သတင်းဘဲ ရေးရေး၊ ဘလော့ဘဲ ရေးရေး။
နိုင်ငံရေး DVD ဘဲ ကြည့်ကြည့်
တရားခွေ CD ဘဲလက်ထဲရှိရှိ
ဆန်လှူရင် အပြစ်။ ဆွမ်းလှူရင် အပြစ်။
ရေလှူရင် အပြစ်။ ငါးလွှတ်ရင် အပြစ်
မသာသဂြို င်္လ်ပေးသူ အပြစ်။ လူမှုရေးလုပ်ရင် အပြစ်
အင်တာဗျုးရင် အပြစ်။ သတင်းမှန်ရေးရင် အပြစ်
အချစ်ကဗျာရေးရင်အပြစ်။ ပျက်လုံးထုတ်ရင် အပြစ်
သီချင်းဆိုသူ အပြစ်။ ထုတ်ဝေသူ အပြစ်
ဒီပဲယင်း ကားတန်းလိုက်စီးမိတာ အပြစ်
လူအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမိတာ အပြစ်၊ မေဒေး နေ့တက်ရောက်မိတာ အပြစ်
ဗိုလ်ချုပ်ဓါတ်ပုံ အလေးပြုမိတာအပြစ်၊ အလံထောင် စက်ဘီးစီးမိသူ အပြစ်
သံဃာတော်တန်း လက်တန်းကာမိသူအပြစ်၊ ကဗျာစာရွက် လက်ကမ်းမိတာအပြစ်၊
မှန်တာပြော အင်တာဗျုးမိတာအပြစ်၊ ၈၈ ကျောင်းသားဘဝ လူဖြစ်မိတာအပြစ်
မုဒိန်းကျင့် ခံစားရသူက အပြစ်၊ အစာငတ် လက်ဖြန့် မိတာအပြစ်
AIDS ရောဂါသည်များ အားပေးမိတာအပြစ်၊ အဓမ္မ လုပ်အားပေးကိစ္စ တိုင်စာပို့ တာအပြစ်
နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ လင်ယူမိတာအပြစ်၊ ဦးဂမ္ဘီရ ယောက်ဖတော် မိတာအပြစ်
NLD အဖွဲ့ဝင်က လှေဌား.လှော်မိတဲ့သူအပြစ်
NLD ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး ဥက္ကဌ ကယ်ဆယ်မိတာအပြစ်
နအဖဖော်လံဖား ဆောင်းပါးရေးသူဆို ကောင်းစား
သခင်ကြီးစားစရာ လာဘ်ရှာပေး. သမီးပေးစရာ သမက်ဖြစ်
ခေါင်းငြိတ်ကောင်းသူများ ညီလာခံ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်
ပုဝါတကားကား နာဇီ မိန်းမအသင်းဖြစ်
ဓါးမြတိုက် လူသတ်ရဲသူများ ရာထူးတိုးမြှင့်
ရှိသမျှ စက်ရုံများ. ပေါချောင်ကောင်း အိပ်ထဲလေလံပစ်
လေဘေး ရံပုံငွေ ဒေါ်လာဖြတ်စား.သပိတ်ဝင်အိပ်ဝင်သူဌေးဖြစ်
စစ်တပ်ကိုလှူသူ..သီရိသုဓမ္မ ဘွဲ့ ရှင်အဖြစ်။
ရှိသမျှ ဆောက်လုပ်ရေးမှန်သမျှ..ထူး အစာဘဲဖြစ်။
ခလေးစစ်သား တွေ စစ်ကျွန်ဖြစ်
ကူးစက်ရောဂါများ AIDS အများအပြားဖြစ်
ပညာမရှိရှား ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိူမ့်ပါး
ခလေးတွေ ဆော့ချိန်မရှိ မအား..အမှိုက်ပုံထဲ အစာရှာစား
ဗဟုသုတနည်း ကမ္ဘာ့လူတန်းစေ့ လိုက်မမှီမွဲ
ဆန်နိူ့ ဆီဗူးနဲ့ ခြင် လခပေးတော့မှာ။
စားနေတာလည်း ကုန်တော့မယ် တော်ပါတော့။
ဖျက်ဆီးခဲ့သမျှ ကြေမွနေပြီဘဲ တော်ပါတော့။
မြေပေါ်မြေအောက်သယံဇာတ ဘေးနိုင်ငံတွေဆွဲစားနေတာ ရပ်ပါတော့။
ဘုန်းနေတာ မသေမချင်း အံတိုနေသည်အထိ
စစ်တပ်သမတ လခ..သမီးကို စိန်ဆင်န်ိုင်ပါသလား။
တရားမ၀င်တဲ့ ငွေမဲ..သူတို့ မခိုးဘဲ ဘယ်ကရမလည်း။
အမှန်ဆို မသိ မမြင် မကြား.
၂၀၀၈ မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၁၂၃ ထိ တိုးမြင့်
ပြန်လွှတ်သူ ၉၀၀၀ကျော် က ရာဇ၀တ်သားများ
မုဒိန်း သမားတွေ စော်ကားကြပစေတဲ့
စစ်တပ် လက်အောက် မနေလိုသူ
မညှာမတာ အမျိုးသာ ဖြုတ်ခဲ့ 
တိုင်းပြည် မငြိမ်တုန်ခိုက် နအဖကြိုက်.
ပြည်ကြီးမဟာ တည်မြဲဖို့ အရေး..
ဒို့ မသာ မဖြစ်ဖို့ သာအရေးကြီးတယ်.
သံသရာ.ငရဲ ဘာညာ နအဖမကြောက်.
ခုတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ တရားစီရင်ရေး.
ရှေ့ နေဆိုတာ မလိုအပ်တဲ့အချိန်.
တရားသူကြီးများ အမြီးကျက် အမြီးစားချိန်.
ဘယ်ဘက်က လာဘ် ပိုများ
ဘယ်ဘက်က အာဏာ ပိုများ
ချိန်ခွင်နဲ့ ချိန်ပြီး စားတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ တရားဓမ္မ ရှာလေလေဝေးတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:42 AM0comments
သွန်သင် ဆုံးမ ထားခဲ့ပါသလည်းကွယ်။
မင်း တို့အစား ကိုယ်ရှက်တယ်
မင်းရဲ့ ရှူမငြီးတဲ့ သားလေးရွှေသွေး
မင်းတို့ မောင်နှံ ဝမ်းသာမျက်ရည်စို့ ဖူးတာ
အမလေး..ကြားလို့ မယုံ နားဝခါး။
ဘာတွေ များ ဖြစ်သွားပါသလည်းကွယ်။
ငါနဲ့ ငါသာ နှိုင်းစရာ..
တနေ့ သုံးနပ်ဖဲစားနိုင်တဲ့ အစာ.
တနေ့သုံးထည်ဘဲဝတ်နိူင်တဲ့အထည်.
တချိန်မှာ..တစီးသာဘဲ စီးနိုင်တဲ့ ကား။
မင်းရဲ့ သားလေး ရွှေသွေး မောင်စွေစောင်းလေး
ဘယ်လောက် ကြာကြာ.. ကြွားနိုင်မလဲ။
သေကောင်ကျရင်..စွန့် ပစ် လင်းတစား။
အနန္တသူရိယ ပြောကြားခဲ့တဲ့ အလင်္ကာ.
ရာထူးစည်းစိမ်..နိမ့်လျှော တစ်နေ့ သောအခါ
ဦးပေါ်ဦးပြခဲ့ခေါင်းတလားအပြင်ဘက်က
ပလာနတ္တိ လက်ဖဝါးသက်သက် လူသေလက်
နောက် တမိနစ်..တစက္ကန့်ဘာဖြစ်မယ် မသိခဲ့
မင်းသား မောင်က..မောဟနွံ အလူးလူး
တရားဓမ္မ ကို ဖယ်..
မင်းမွေးရ ဝမ်းရေစပ်တယ် သူငယ်ချင်းရယ်။
ငယ်စဉ်က နာဘူးတဲ့ ပုံပြင်တပုဒ်..
" တော်လှချည့် ငါ့သား။ များများသာ ယူခဲ့
မိုးခါးရေဆို သောက်သာသောက်..ရရင်ခိုးခဲ့ "
သား ခိုး တတ်တာ..
မှန်ရာ မသွန်သင်တဲ့ အမေမိုက်..
မင်း မှောင်မိုက်မှာ မငိုစေချင် သူုငယ်ချင်း။
စွေစောင်း (သို့ ) နေလင်းမောင်၊ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် ၃၅၇၅၆၊ အဖကားဒရိုင်ဘာ၊ နေရပ် မန္တလေး ပိုက်ကျုံး၊ လက်ရှိနေရပ် Mephi University (Russia, Moscow)၊ (http://oppositeyes.blogspot.com/) ၏ မိခင်..မသဒ္ဓါ၏ သူငယ်ချင်းသို့" စိတ်မကောင်းပါဘူး သူငယ်ချင်းရယ်။ ဖော်လံဖား..စစ်ဗိုလ်အမေ လုပ်ရတာ..ဂုဏ်ရှိတယ် ထင်ရသော်လည်း..ကုသိုလ် က တပဲ ငရဲက တပိဿာ "
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:27 AM 1 comments
လေးမြှားတစ်စင်းနဲ့ အနုပညာသည်။ ခေါင်းမငုံမဲ့ ဘလော့ဂ...